Esi edeba aha na WhatsApp na Android-smartphone, iPhone na PC
Dị ka ị maara, iji nweta ọrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ Ịntanetị ọ bụla, a na-achọrọ akaụntụ debara aha na ya. Ka anyị lelee otu esi emepụta akaụntụ na WhatsApp - otu n'ime ozi ndị kachasị ewu ewu na usoro ihe ọmụma ndị ọzọ dị taa. Ogologo ikpo okwu, ya bụ, ike ịwụnye ndị ahịa nke WattsAp ozi na ngwaọrụ ndị na-arụ ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ, na-akpata ụfọdụ ihe dị iche iche maka ịdenye aha na ọrụ achọrọ n'aka ndị ọrụ nke ntanetị dị iche iche.
Na-agbakwụnye na ihichapụ kọntaktị na WhatsApp maka gam akporo, iOS na Windows
Ngwa ngwa WhatsApp, nke na-enye ederede n'efu, olu na nkwurịta okwu vidiyo, bụ ihe a ma ama gburugburu ụwa. Na enweghị nke ahụ, nnukwu ndị na-ege ntị na-emejupụta mgbe niile site na ndị na-amalite na-amaghị otú e si edozi nsogbu a ma ọ bụ nsogbu ahụ na onye ozi a. Na isiokwu anyị taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi tinye na / ma ọ bụ hichapụ onye na-akpọ akwụkwọ akwụkwọ WattsAp na ngwaọrụ mkpanaka na gam akporo na iOS, nakwa na kọmputa nkeonwe na Windows.
Hichapụ ozi site na enyi gị na WhatsApp
N'oge nkwurịta okwu na VotsAp, ị nwere ike izipu onye na-ezigara ozi ọjọọ ahụ, mehie, ma ọ bụ ọbụna ziga ya na nkata ọzọ. Na nke ọ bụla n'ime okwu ndị a, ngwọta kachasị mma ga-abụ ihichapụ "ozi" ahụ na-adịghị mkpa ọ bụghị naanị n'ime onwe ya, kamakwa na onye ozi ya. N'ezie, ị gaghị ewepụ ekwentị ya - ihe niile dị mfe karịa, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'emeghị ụfọdụ nuances.
Esi melite WhatsApp na ekwentị gị ma ọ bụ iPhone
Mgbakwunye Software bụ akụkụ dị mkpa nke iji ngwaọrụ ọgbara ọhụrụ. Banyere ndị ozi na-ewu ewu, imelite nsụgharị nke onye ahịa ahụ na-enye ohere ọ bụghị naanị iji hụ na ọ kwụsiri ike ma nweta ọrụ ọhụrụ, ma na-emetụtakwa ọkwa nchebe nke onye ọrụ na-ezipụ ozi site na ọrụ.
Olee otú iji wụnye WhatsApp na gam akporo-smartphone na iPhone
Ndị ozi taa na-eburu ọnọdụ kwesịrị nsọpụrụ na ndepụta nke ngwa ndị ọkachamara smartphone jiri mee ihe, nke a bụghị ihe ijuanya, n'ihi na ngwaọrụ ndị a dị mfe ma nye ndị ọrụ ha ọtụtụ ohere. Ka anyị lelee otu esi enweta ngwa ngwa ahịa nke WhatsApp na njikere iji n'efu na ekwentị gị - ọrụ kachasị ewu ewu maka ịkọ na ịkekọrịta ozi na Intanet.
Ozi statuses na WhatsApp ozi
Ịmalite ịmụta akụkụ nke WhatsApp, ndị ọrụ na-echekarị banyere ihe njirimara nke na-apụta ozugbo na ozi nke ozi zitere site na ozi ozugbo. Ka anyị hụ ihe ozi onye na-eziga ozi n'ụzọ dị otú a, ọ ga-abara uru na usoro ọnọdụ nke a na-enyefe na mbupu ọ bụla n'ime ụzọ kachasị ewu ewu nke ịgbanwerịta data na Ịntanetị, ma tụlee ohere nke ịgaghị eziga akụkọ na ịgụta ozi na ndị na-akpọ gị.
Olee otú iji wụnye whatsapp abụọ na ekwentị
Mkpa ịwụnye abụọ mbipute nke WhatsApp na otu smartphone nwere ike ibilite site na ọtụtụ ndị na-arụsi ọrụ ike nke onye ozi ahụ, n'ihi na ọdịiche dị n'etiti nnukwu ihe ọmụma na-enweta kwa ụbọchị site na nke oge a na isi na ọ dịghị mkpa bụ ọrụ dị mkpa. Tụlee ụzọ maka inweta abụọ n'otu oge na-arụ ọrụ nke ngwà ahụ na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ kachasị ewu ewu - Android na iOS.
Anyị na-ezipụ foto site na WhatsApp na Android, iOS na Windows
Na usoro nke ịkekọrịta ozi site na WhatsApp, ndị ọrụ na-echekarị na ọ dị mkpa iziga foto dịgasị iche iche na ndị ha na-arụ ọrụ. Ihe enyere gị aka na-akọwa ụzọ ndị na-enye gị ohere iziga fọrọ nke nta ka ọ bụrụ foto ọ bụla na onye ọzọ na-esonyere ya, ma na-etinyere n'etiti usoro arụmọrụ kachasị ewu ewu taa - Android, iOS na Windows.
https://termotools.com ig.termotools.com © Whatsapp 2020